Masar oo shaaca ka qaaday natiijooyinka baadhitaanka "hydroxychloroquine" oo lagu Daweynayo COVID19 – Beegsonews-Wararka maanta
Home Caafimaadka Masar oo shaaca ka qaaday natiijooyinka baadhitaanka “hydroxychloroquine” oo lagu Daweynayo COVID19
Masar oo shaaca ka qaaday natiijooyinka baadhitaanka “hydroxychloroquine” oo lagu Daweynayo COVID19
halkan waxaan idinku soo gudbinayaa tijaabo shaybaadh oo lagu sameeyey dawada duumada oo lo adeegsanayo in lagu daweynaayo xanuunka saf marka ah ee covid19 oo ay ku samey dawlada masar.
Wasiirka Caafimaadka Masar, Hala Zayed, ayaa ku dhawaaqay fiidnimadii Sabtida in dawada muranka badan dhaliyay ee “hydroxychloroquine” ay ka soo baxdey natiijooyin aad u weyn oo lagu daweeyey bukaannada ku dhaca covid19.
Wasiirka Masar wuxuu sheegay, intii lagu jiray faallooyinka telefishanka, in dawada “Hydroxychloroquine” lagu meeleeyay borotokoolka daaweynta ee loogu talagalay dadka qaba coronavirus maalinta koowaad.
Waxay tidhi “waxaan daaweynay maalintii ugu horraysay, kiiskiinnii lagula dhaqmay oo dhanna si weyn ayaa looga soo kabsaday, natiijooyin wanaagsanna way ka gaadheen Masar.”
“Markii qaar ka mid ah waraaqaha cilmi baarista ay u muuqdeen kuwo dalbanaya inaan la isticmaalin, waxaan ku adkaysaney inaan isticmaalno sababta oo ah waxaan heysanaa cadeymo cilmi baaris oo cilmi ku dhisan iyo warbixinno kusaabsan muhiimadiisa.
Waxaa lagu soo waramay in daraasad caafimaad ay soo bandhigtay in daawada duumada ee uu dalacsiiyay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump sidii loo daweyn lahaa Covid-19 aysan wax ku ool aheyn ka hortagga infekshinka dadka ku dhacay cudurka Coronavirus.
Goor sii horreysay, Wasaaradda Caafimaadka Masar waxay shaacisay diiwaangelinta 1497 kiis oo cusub oo cadeeyay inay ka soo baxday falanqaynteeda sheybaarka ee virus-ka, iyada oo qayb ka ah kormeerka iyo habraaca baaritaanka ee wasaaradda, iyadoo la raacayo tilmaamaha Ururka Caafimaadka Adduunka, iyagoo tilmaamaya geerida 32 kiis oo cusub.
warbixinta oo carabiya linkagan hoose kala soco